अर्घाखाँचीमा संसारकै सानो अण्डा , गिनीजबुकमा लेखाउने
अर्घाखाँची २४ जेठ । अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा कुखुराले सन्सारकै सबैभन्दा सानो अन्डा पारेको छ । सानो अन्डा पारेपछि गिनिज बुकमा लेखाउने प्रयास थालिएको छ । सन्धिखर्कका कृषक हरिप्रसाद अधिकारीले गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा उल्लेख गरेकोभन्दा सानो अन्डा आफ्नो कुखुराले पारेको दाबी गर्नुभएको छ । उहाँले गिनिज बुकमा रेकर्ड राख्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको पनि बताउनुभएको छ […]
दोलखामा च्याउँ खाएर १० जना बिरामी
चरीकोट , २३ जेठ । दोलखाको झ्याँकु गाविसका १० जना स्थानीयहरु जंगली च्याउ खाएर विरामी भएका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रहरी नायव उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डेका अनुसार झ्याँकु गाविस–९ का १० स्थानीय जंगली च्याउ खाँदा बिरामी परेका छन् । बिरामीमध्ये २ जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गम्भीर बिरामी पर्नेहरुमा झ्याँकु–९ का […]
बाँदरमुढे घटनाको ११ बर्ष पुरा, उचित न्याय दिन माग
चितवन , २३ जेठ । चितवनको दक्षिण माडीमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले यात्रुबाहक बसमा गरेको बम विस्फोटमा परी घाइते भएकाहरुले उचित न्याय दिन माग गरेका छन् । बाँदरमुढे घटना पीडित सङ्घर्ष समितिका उपाध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले न्याय नपाउने आशङ्का बढिरहेको भन्दै पीडितलाई थप पीडा नदिन आग्रह गरे । न्याय दिन आलटाल भइरहेको भन्दै पीडितले उचित न्याय दिनेतर्फ […]
भ्रष्टचारको अखडा बन्दै, खानेपानी संस्थान जनकपुर शाखा
जनकपुर २१, जेठ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल खानेपानी संस्थान जनकपुर शाखाले काम विशेषले आउने सेवाग्राहीबाट सरकारी दस्तुरबाहेक कैयौँ गुणा बढी दस्तुर लिने गरेको उपभोक्तावर्गले आरोप लगाएका छन् । नयाँ मिटर जडानका लागि आउने सेवाग्राहीबाट त्यहाँका केही कर्मचारीले रू. पाँच हजार ६ सय दस्तुरको रसिद दिए पनि रू. २५ हजारदेखि ३० हजारसम्म लिने […]
डोटीमा सामान्य बिवादमा हँसीयाले हान्दा ज्यान गयो
डोटी, २० जेठ । छिमेकीसँग सामान्य विवादमा हँसियाले हान्दा एक युवकको ज्यान गएको छ । डोटीको महादेवस्थान-८ बस्ने २२ वर्षका रणबहादुर रोकाया र ३२ वर्षका भीमबहादुर रोकायाबिच विवाद भएको हो । सामान्य विवादमा भीमबहादुरले हानेको हँसिया लागेर रणबहादुर घाइते भएको र उपचारका लागि लैजाँदै गर्दा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ । बुधबार दिउँसो हँसिया प्रहारबाट […]
राजधानीबाटै चितुवा र ध्वाँसेको छालासहित तीन पक्राउ
काठमाडौँ, १७ जेठ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले चितुवा र ध्वाँसेको छालासहित तीन जनालाई राजधानीबाटै पक्राउ गरेको छ । प्रहरी कार्यालयका अनुसार ब्युरोबाट खटिएको टोलीले हिजो दुर्लभ वन्यजन्तु चोरी गरी बेच्न लगेको अवस्थामा बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा नुवाकोटका रुपबहादुर तामाङ, सुरेश तामाङ र धादिङका कुलबहादुर घले रहेका छन् । दुर्लभ वन्यजन्तु […]
पाठ्यपुस्तक नपाएको बहानामा शिक्षकहरु फिल्म हेर्न व्यस्त
मनोज भट्टराई, ओखलढुंगा, १६ जेठ । ओखलढुंगा यसमस्थित यसम मावि मा पाठ्यपुस्तक उपलव्ध नहुदा शिक्षकहरु फिल्म हेरेर दिन कटाउन थालेका छन् । पाठ्यपुस्तक अभाव भएको भन्दै कक्षा १ देखि ५ मा अझै पठनपाठन सुचारु हुन सकेको छैन । शैक्षिकसत्र सुरु भएको १ महिना विति सक्दापनि पुस्तक अभावले पठनपाठन अबरुद्ध भएको हो । यसम माविमा मात्र […]
मनिषाको प्रेमी‘आशिष’को पोलीग्राफ गरिने
नवलपरासी, १५ जेठ । फुटबलर विमल घर्ती मगरकी बहिनी मनीषाको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका रुद्रनारायण चौधरी ‘आशिष’को पोलीग्राफ गरिने भएको छ । आशिष प्रेमी हुन् र, उनले हत्या गरेको आशंकासहित अनुसन्धान भइरहेको छ । तर, उनले भने घटना भएको रात मनिषा र आफ्नो झगडा भएको तर, हत्या नगरेको दाबी गरेका छन् । जिल्ला […]
भीरबाट लडेर बृद्धको ज्यान गयो
ताप्लेजुङ, १४ जेठ । ताप्लेजुङको निघुरादिनमा भिरबाट लडेर एक वृद्धको ज्यान गएको छ । बुधबार बेलुका नजिकै रहेका आफ्ना दाजुलाई भेट गरी घर फर्कने क्रममा निघुरादिन–४ का अन्दाजी ८५ वर्षीय सन्तबहादुर गुरुङको भिरबाट लडेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ । सो गाविसको खानीडाँडा भन्ने भिरबाट लडेर मृत्यु भएका गुरुङको शव बिहीबार बिहान मात्रै […]
विमलकी बहिनी मनिषाको मृत्य रहस्यमय
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका स्ट्राइकर विमल घर्ती मगरकी बहिनी १७ बर्षीया मनिषा घर्ती मगरको मृत्यु रहस्यमय भन्दै पोष्टमार्टमका लागि काठमाडौं ल्याउने तयारी गरिएको छ। पोष्टमार्टमका लागि भन्दै जिल्ला अस्पताल परासीमा पुर्यइएको शवको पोष्टमार्टम हुन सकेको छैन। ‘पोष्टमार्टमका लागि काठमाडौं लैजानेबारे छलफल भैरहेको छ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी राजेन्द्र चौधरीले नागरिकन्युजसँग टेलिफोनमा भने ‘अहिले पोष्टमार्टम […]